I-Danish Modern house ene-Stunning Mountain Views - I-Airbnb
I-Danish Modern house ene-Stunning Mountain Views
Vuka ukuze uthole ukubukwa okunamagquma kusuka kule ndlu esanda kulungiswa ye-Danish Modern 1960s. Geza khona kanye ekamelweni eliyinhloko le-King ngenkathi ubheka amafu antanta ngaphansi kwakho. Yabelana ngengilazi yewayini nomngane wakho eduze kwendawo yomlilo eshisayo noma dlala imidlalo yebhodi uhlezi komata baseMoroccan bangempela endaweni yokuhlala ebukekayo.
Le yindlu evulekile esanda kulungiswa eyakhiwe esitezi esisodwa. Inezindlu zokugezela ezi-2 ezisesitayeleni, kanye nobhavu egumbini lokulala elikhulu. Igumbi lokuhlala, idekhi kanye negumbi lokugezela eliphambili libonisa ukubukwa okumangalisayo kwezintaba.
Njengoba i-Stone Church iphansi komgwaqo, i-Sam's Point Preserve phezulu komgwaqo kanye ne-Bear Hill Preserve ekhoneni, ziningi kakhulu izinketho zendawo ongakhetha kuzo phakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Ukushayela isikhashana kuzokuletha ehlathini loMbuso, izinkundla zegalofu ezinhle kakhulu, i-hang-gliding, i-sky-diving, ukugibela amatshe, izinto zakudala nezimakethe zabalimi lapho ungathola khona ukudla okusha, okutshalwe endaweni ukuze uthole ukudla kwakho kwakusihlwa.
Hey guys, I'm Victoria! I'm a wife, a mother and a fashion photographer living in NYC.
Noma yimiphi imibuzo izophendulwa ngokushesha ngokuthumela umlayezo we-airbnb noma ngocingo lomuntu siqu uma kudingeka.